‘नागरिकताको समस्या मधेसी अनुहार भएकाबाट मात्र छ भन्ने हामीमा भ्रम छ’ | Ratopati
‘नागरिकताको समस्या मधेसी अनुहार भएकाबाट मात्र छ भन्ने हामीमा भ्रम छ’
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीसँगको अन्तरवार्ता
personलोकेन्द्र भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeचैत २४, २०७५ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ– सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा ६ महिनादेखि बन्धक बनेको नागरिकता विधेयकका बारेमा केही दिनयता विवाद र बहस सुरु भएको छ । खासगरी संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्था बीचमा नै गृहमन्त्रालयले नागरिकता वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गरेपछि यो विवादले झनै सघन रूप लिएको छ । महिला र पुरुषबीच समान नागरिकताको हक हुने वा नहुने ? नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएका विदेशी महिला वा पुरुषलाई कहिले र कसरी नागरिकता दिने वा नदिने ? आमाको नामबाट मात्रै सन्तानलाई नागरिकता दिने वा नदिने ? र गैरआवासी नेपालीलाई कुन हैसियतको नागकिता दिने ? जारी नागरिकता विधेयक माथिको बहसमा यी चारवटा मुख्य विषयमा देखिएको मत मतान्तर र समाधान के भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीसँग राटोपाटीका लागि लोकेन्द्र भट्टले कुराकानी गरेका छन् ।
नागरिकता विधेयक सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा ६ महिनादेखि अड्किएको छ । पछिल्ला दिनमा मधेस र पहाड तथा महिला र पुरुष सांसदहरु नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर विभाजित भएका छन् । नेपालमा नागरिकताको विषय स्थायी समस्याका रूपमा देखिएको छ । यसको समधान के होला ?
नागरिकताको विषयमा तपाईंले ठीक कुरा गर्नुभयो । समस्याको समनधान गर्नतिर लाग्ने कि यसलाई राजनीतिक चलखेलको विषय बनाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
हामीले नागरिकताको विषयलाई समस्या हो, समस्या छ भनेर लिन्छौँ भने त्यसको समधान गर्नलाई उचित बाटो लिन सकिन्छ । त्यो उचित बाटोको प्रस्थान विन्दुबारे छलफल भइसकेको छैन । तर यहाँ परस्थिति के देखिएको छ भने कि अति संवेदनशील भएर नकारात्मक कुरा गर्छौं कि आवश्यकताभन्दा बढी उत्साहित भएर नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ भन्छौँ । तयसैले यी दुवै कुरा ठीक छैनन् ।
ठीक के हो त ?
हाम्रो मुलुकमा जो स्थायी बासिन्दा छन् । जो नेपाली नागरिक हुन् । उनीहरुले नागरिकता पाएन भने त्यो हाम्रो निम्ति दुर्भाग्य हो । जसले नागकिता पाउनुपर्ने हो, उनीहरुले पाउनुपर्छ, जसले नपाउनुपर्ने हो उनीहरुले पाउनु हुँदैन । यो दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखेर समस्याको समधान खोज्नतिर लागियो भने हाम्रो समस्याको समधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर हामी यस विषयलाई राजनीतिक दाउपेच बनाउनतिर लागेर अहिलेसम्म समस्या देखिएको छ ।
यो त तापईंको तर्क भयो । नागरिकता विधेयकबारे संसदमा चलिरहेको बहसलाई कसरी लिनुभएको छ । त्यहाँ देखिएको मुख्य लफडा के हो ? संसदमा प्रस्तुत विधेयक हुबहु पारित हुँदा कस्तो असर पर्छ ?
संविधान बनाउँदादेखिको नै मेरो मान्यता अलि अलग छ । नागरिकताको सम्बन्धमा भन्दा पनि यो मुलुकमा जो मान्छेहरु बसेको छन् उनीहरु यो मुलुकका नागरिक हुन् । ती नागरिकहरुलाई हामीले राज्यविहीन बनाउनु हुँदैन । हामीले राज्यविहीन बनायौँ, उनीहरु नेपालमै बस्छन् । त्यसले उनीहरुको वृद्धि विकास रोकिन्छ ।
उदाहरणका लागि उनीहरुले जागिर खान पाउँदैनन् । उद्योग व्यवसाय गर्न पाँदैनन् र बैङ्किङ कारोबार गर्न पाउँदैनन् । अनि त्यस्तो हुँदा हामीलाई नोक्सान हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिएनौँ भने उनीहरुको सिर्जनशीलता र उत्पादनशीलतासँग राज्य जोडिन पाउँदैन ।
राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना नगर्ने हो भने कस्तो प्रकारकाको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने, कस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई नागरिकता नदिने भन्नेबारेमा अध्ययन गर्नुपर्यो । तर त्यस्ता व्यक्ति पत्ता नलागेका भने होइन । नागकिताको ठूलो छलफल भएको हर्कबहादुर गरुङ प्रतिवेदनबाट हो । उहाँले दिएको प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि त्यसले धेरै ठूलो हलचल ल्याएको छ । एकथरीले त्यसको व्यापक समर्थन गरे, एकथरीले त्यसको खुब विरोध गरे । अब त्यो परिस्थितिबाट यहाँ आइसक्दा २०४६, ०४७ को संविधान बन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो । साथै २०१९ सालमा हामीले पञ्चायतका अन्य कुनै कुरा मानेनौँ तर नागरिकताको कुरा मान्यौँ । त्यसले हामीले ०६३ को अन्तरिम संविधान बनाउँदा एउटा अर्को फड्को मार्न बाध्य भयौँ । ०४६ सालअघि नेपालमा जन्मिएका सबैलाई जन्मसिद्ध नागरिकता भनेर नागरिकता बाढ्यौँ । तर पनि हाम्रो समस्या समधान भएन ।
किन समाधान भएन त ?
यसका केही कारणहरु छन्, केही वस्तुगत आधारहरु छन् ।
जस्तै विशेष गरेर तराई–मधेसमा नरहेका केही व्यक्तिको नाममा न जग्गा छ, न घर छ । त्यस्ता व्यक्ति अर्काको जग्गामा बसेको छन् । मुसहर र राजवंशी जस्ता आदिवासी जनजातिहरुले पछिल्लो समय नागरिकता वितरण गर्दा जानकारी नै पाएनन् । अहिले नागरिकता निकै नै महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ । नागकिता नभई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, वृद्धभत्ता र बैङ्क खातासमेत खोल्न पाइँदैन । एकातिर नागकिताको महत्त्व बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता पाउन सकेको छन । अर्को कुरा पाउनुपर्ने थुप्रै व्यक्तिले पनि नागरिकता पाएको चर्चा पनि चलिरहेको छ ।
दोस्रो कारण छ । पहिले यो समस्या तराई– मधेसमा मात्र थियो । पहाडमा सानो सानो भए पनि घर थियो । तर अहिले परिस्थिति फरक छ । पहाडमा रोजगारीको अवसर नहुँदा भएका घर जग्गा छोड्दै छन् । सहरबजारतिर गएर सुकुम्बासीका रूपमा बासोबास गर्नेहरुको सङ्ख्या बढ्दै छ । उनीहरुको कुने अभिलेख छैन । त्यसले हिजो पहाडमा नदेखिएको समस्या विस्तारै देखिन थालेको छ ।
हामीसँग तथ्याङ्कको भरपर्दो आधार भएन । साथै तथ्याङ्कको बलियो आधार नहुँदा यी नेपाली हुन्, होइन् भन्नेर छुट्याउने आधार निकै कमजोर छ । तथ्याङ्कको भरपर्दो आधारका नहुँदा नेपालका बासिन्दा हुन्, नेपाली नागरिक हुन् तर नागकिता पाउन नसकेको अवस्था छ ।
तेस्रो समस्या छ । जसको बाबु विदेशी छ । आमा नेपाली छ । तिनका सन्तानलाई संविधानअनुसार अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने छ । त्यो दिनलाई हामीले कञ्जुस्याइँ गरेका हैनाँै । उनीहरुको कही जानेवाला पनि छैन । किने भने उनीहरु जन्मेको र हुर्केका यतै हुन् ।
चौथो समस्या छ । बिहे गरेर विदेशी भए । विशेष गरेर हाम्रो मुलुकमा खुला बोर्डर छ । बिहे गरेर त गए, त्यहाँ बस्न सकेनन् । बच्चा लिएर माइत पर्किए । अब उनीहरुको बाबु पनि विदेशी ऊ उतै बस्छ । बच्चा नेपालमा आएर मावाली वा आश्रय स्थलमा हुर्किने भयो । त्यसलाई पनि हामीले नागकिता दिन कञ्जुस्याइँ गरिरहेका छौँ । अब त्यो उतापट्टिको नि हुँदैन । उनसले आफ्नो बाउको घर देखेको पनि छैन । आमाको जानसक्ने परिस्थिति नै छैन । त्यस्ता व्यक्तिको नागिकता रोकेर राखेकाले समस्या निम्तिएको छ ।
पाँचौँ समस्या के छ भन्नु हुन्छ भने केही व्यक्ति उद्योग व्यवसाय गरेर २०, २५ वर्षदेखि यतै बसिरहेका छन् । नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ । जसले नेपालमा व्यवसाय गर्छन्, उद्योग धन्दा गर्छन्, नेपाली भाषा बोल्छन् । नेपालमा बसेर पैसा आर्जन गरिराखेका छन् । उनीहरुले अङ्गीकृति नागरिकता आवेदन दिन्छन् । हामीले अङ्गीकृत नागरिकताको प्राप्तिका लागि क्राइट एरिया (मापदण्ड) तोकेका छौँ । तर त्यो सबै पूरा गरिसकेपछि पनि नागरिकता दिँदैनौँ । अङ्गीकृत नागरिकता दिने कुरामा पनि हामी कसिलो बन्ने गरेका छौँ । तपाईंले हेर्नुभयो भने वर्षको २ सय नागरिकता पनि दिँदैनौँ होला । यो अर्को समस्या हो ।
सातौँ समस्या के हो भन्दा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता । यसबारेमा कस्तो छ भन्दा हिजो हामीले ठिक गर्यौँ , बेठिक गर्यौँ मलाई थाहा छैन । विवाह गरेर यहाँ (नेपालमा) आएपछि हाम्रो सामाजिक, सांस्कृति र धार्मिक जे भन्नुहोस् उनीहरुको गोत्र नै फरक हुन्छ भन्छौँ । त्यो मूल्य र मान्यताले उसको उतातिरको कुनै कुरा बाँकी रहँदैन । त्यसकारण बिहे गरेर आउने वित्तिकै हामीले यताको वैवाहिक नागरिकता दियौँ । अहिले आएर म सुन्दै छु, यसकालाई पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गर्नु भन्ने प्रावधान लगाउने तर्क आइरहेका छन् । यो कति जायज कति नाजाय साझा विवेकको कुरा हो । यसबारे म केही भन्दिनँ । तर मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा पहिले त्यसको अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ ।
जस्तो हिजो हामीले जुन नागरिकता दिइराखेका थियौँ । आज त्यो नदिँदा अथवा त्यो दिरहँदा कति नोक्सानी भयो । तिनले नेपालविरुद्ध काम कारबाही गरेर गरेनन् । हामीलाई कस्तो असर पर्यो भन्नेबारे केही अनुसन्धान छैन ।
हामी जे कुरा भन्छौँ, भावनात्क रूपमा भन्छौँ । भावनागत रूपमा गर्ने कुराले कठिनाइ उत्पन्न गर्छ । हिजोबाट दिरहेको वा चलन चल्तीमा आइरहेको कुरा छ । त्यसलाई फेर्नुपर्दा किन फेर्नुपर्यो भन्ने ठोस कारण, वस्तुगत कारण दिन सकिएन भने त्यसले भोलि अफ्ठ्यारो गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो सङ्ख्या फेरि कति छ ?
जस्तै छिमेकी मुलुकसँग हाम्रो रोटीबेटीको कुरा छ । हिन्दुस्थानबाट बिहे गरेर नेपाल आउनेको सङ्ख्या कति छ ? जानेको सङ्ख्या कति ? त्यसको न हामीसँग डाटा छ, न अनुसन्धान र छलफल छ । हचुवाका भरमा कसैले दिनु हुँदैन भनेको छ, कसैले दिनुपर्दैन भनेको छ । साथै केही सर्त थप्नुपर्ने नपर्ने कुरा पनि उठेका छन् । हाम्रो यस्तो दृष्टिकोण भनेको हचुवा खालको दृष्टिकोण हो ।
नागरिकताका विषयमा देखिएका समस्या यी हुन जस्तो लाग्छ मलाई । यी समस्या मधेसमा मात्र छैन, पहाडमा पनि छन् । तर धेरै र थोरैको कुरा मात्र हो । भारत दक्षिणमा मात्र छैन । पश्चिममा पनि छ । हाम्रो डोटी, डढेल्लधुरा लगायतका जिल्लाका मानिसहरुले पारिपाटी छोरी बेटी लेनदेन गर्छन् । उता सिक्किम, दार्जिलिङतिर धरान पूर्वतिरका र मान्छेको पनि लेनदेन छ । यो मधेसीको अनुहार भएकाबाट मात्र छ भन्ने हामीमा भ्रम छ ।
तपाईंले यति भनिरहँदा संसदमा मधेस र पहाडबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुबीच जुहारी चलिरहेको छ । यसको भित्री रहस्य के हो ? तपाईंले कसरी बुझ्नुभएको छ ।
मलाई मान्छेको रहस्यमा पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन, नियतमा जानुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन । प्रष्ट कुरा के हो भने कुनै पनि सांसदले नेपालीले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर भन्न सक्दैनन् । पाउनुपर्ने मान्छेले पाउनुपर्छ, नपाउनुपर्ने मान्छेले पाउनु हुँदैन भन्नेमा त सबै एक मत हुनुहुन्छ होला नि ?
त्यसैले मैले पहिले नै भने कुनै विषय वस्तुमा प्रवेश गर्दा त्यो समस्या हो कि होइन भनेर छुट्याउनुपर्छ । नागरिकता समस्या हो भने समाधान खोजनुपर्यो, समस्या होइन भने बेवास्ता गर्नुपर्यो । संसदमा जुन तरिकाले छलफल भइरहेको छ । किनकि मत त्यहाँ छैन । अनि अखबारमा आइरहेको छ । त्यसैले त्यहाँ सही ढङ्गले छलफल नै हुन सकेको छैन ।
त्यसमा कोही एकदम कट्टरता देखिन्छन् । त्यो अतिवादी विचार हो । मनमा पाउनुपर्नेले पनि नपाओस भन्ने बनावटी कुरा गर्ने, एकथरी नपाउनुपर्नेले पनि पाउनुपर्छ भन्ने खालले प्रस्तुुत भइरहेको देखियो । उनीहरुको नागरिकताको समस्या टुङ्ग्याउन नदिने र समस्यालाई बल्झाइराख्ने प्रत्यन देखिन्छ । यस्ता कुराहरुले हामी ठाउँमा पुग्दैनौँ । हामीले हाम्रो समस्यालाई १, २, ३, ४, ५ भन्दै केलाउनुपर्छ । अनि त्यसै गरी समाधानको उपाय के हो भनेर छुट्याउनु पर्छ । त्यही कुरा कानुनका रूपमा बनाउनुपर्छ । यो समस्याको सरल बाटो यो हो । त्यो कुरा गरिँदैन भने यो कहीँ टुङ्गिँदैन ।
महिला–पुरुषका रूपमा सांसदहरु विभाजित हुँदै तर्क वितर्क गरिरहेका छन् नि ? यस्तो किन भइरहेको छ ?
पहिलो कुरा जो महिला सांसदहरु महिला र पुरुषको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले महिलाको हकमा जुन हैसियतले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाइन्छ, त्यही हैसियतले पुरुषले पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने भनाइ हो ।
यो कुरामा संविधान निर्माणका भेला पनि व्यापक छलफल भएको थियो । समानताको आधारमा नागरिकता प्रदान हुनुपर्छ, महिलाले जसरी पाउँछिन्, पुरुषले पनि त्यसरी नै पाउनुपर्छ भन्ने खालको धारणा त्यो बेलामा पनि आएको हो ।
यसको अर्थ यहाँ बुहारीको हक सुरक्षित भयो, छोरीको हक सुरक्षित भएन नै हो । यसमा हिजो पनि आवाज उठेको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले संविधानमा जुन व्यवस्था गर्यौँ, त्यसको प्रतिकूल ऐन ल्याएर अहिले कानुन बनाउन सकिँदैन कि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने कानुन संविधानको अनुकूल ल्याउनुपर्छ ।
दोस्रो कुरा छ । यो कुरा नजानेर राखेको हो त ? यो कुरा छलफल नगरी राखेको हो त ? यति कुरा हिजो बुझिएको थिएन त ? संविधान निर्माणका बेला यो कुराको जानकारी थिएन त ? होइन । यो सबै बुझेर सचेतनापूर्वक राखिएको विषय हो । यसको पछाडिको कारण के हो भने हामीले कसैलाई बिहारी बनाएर ल्याउँछौँ भने सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक रीतिरिवाज र चालचलनले ऊ त हाम्रो घरको सदस्य भइहाल्छ । उसले उता पर्तिरको कुनै आवस्था गरेको हुँदैन । त्यसैले उसलाई आएको पहिलो दिनबाट नागरिकता दिनुपर्छ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो स्वाभाविक पनि छ ।
अर्को कुरा छोरी बिहे गरेर उता जान्छे । बिहेपछि ऊ श्रीमानसहित यता बस्न आउँछे भने उसको श्रीमानले पनि पहिलो दिनमै नारिगकता पाउनु पर्छ भनिएको छ । यो त्यति जायज हुँदैन । तर उसलाई बस्न उद्योग व्यवसाय र रोजगारीका लागि केही आधारहरु तय गरिदिनुपर्छ । तुरुन्त दिनुपर्छ भन्ने कसैको माग होइन । विश्वव्यापी घोषणापत्रका आधारमा महिला सांसदले अधिकार कुण्ठित भयोभन्दा यो कुरा ठिक हो । उनीहरुले भनेको कुराको दमै छैन भन्ने होइन ।
छोराले बिहे गरेर ल्याएकी बुहारीले लगत्तै नागरिकता पाउने, छोरीले बिहे गरेर ल्याएको ज्वाइँले नपाउने भन्न पनि पाइएन नि । लैङ्गिक हिसाबले त छोरा र छोरी समान हुन् । उनीहरुले समानताको प्रश्न उठाए, उत्तर के त ? तर समानताको हक कुण्ठित भयो भनिए पनि खुला सीमालाई ध्यानमा राखेर सचेतनापूर्वक नेपालको संविधानमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । अहिले कानुन बन्ने बेलामा समानताको कुरा गर्नु त्यति उचित हो जस्तो लाग्दैन ।
महिलामाथि अर्को पनि विभेद देखिन्छ । जस्तै बाबुको नामबाट छोरा छोरीले सहजै नागरिकता पाउने तर आमाले भने बाबु भए नभएको कारण खुलाउनुपर्ने भन्ने आवाजलाई के भन्नु हुन्छ ।
यसमा म प्रष्ट छु । नेपाली नागरिक छ भने बाबु वा आमा दुवैको नामबाट नागरिकता सहजतापूर्वक पाउनुपर्छ । अब खाली एउटा प्रश्न छ, आमाको नेपाली नागकिता छ तर छोराछारी बिहे गरेर विदेशमा बसोबास गर्छन् भने त्यसको हकमा कस्तो व्यवस्था राख्ने भन्ने छ । साथै आमा नेपाली, बाबु विदेशी रहेको खण्डमा पनि अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने छ । त्यसमा पनि यस विषयमा भने केही कडा प्रावधान राख्नुपर्छ । नेपालमै बसोबास गर्ने नेपालीले आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ ।
अहिले बुहारीको अधिकार सुरक्षित भयो, छोरीको अधिकार सुरक्षित हुन सकेन भन्दै गर्दा बुहारीका हकमा पनि ५ वा ७ वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । अन्य देशमा पनि यस्तै व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार जानुपर्र्ने आवाज जोडतोडले उठेको छ । यसको अर्थ के हामीले संविधान बनाउँदा नै कमजोरी गरेका थियौँ ?
होइन, संविधान बनाउँदा कमजोरी भएको भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने– लिने कानुनको सुरुवात नेपाल नागरिकता ऐन २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली–२०१५ बाट भएको मानिन्छ । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म हामीले बिहे गरी ल्याएकी बुहारीलाई तत्कालै नागकिता दिँदै आएका छौँ । यो कुरालाई तपाईंले इतिहास, सामाजिक, सांस्कृति वा धार्मिक कुराको रूपमा नै मान्नुहोस् । आज त्यसलाई अचानक बन्द गर्नुपर्ने कारण के आइपर्यो ? त्यसको तर्कपूर्ण जवाफ चाहियो नि !
अन्य देशमा कस्तो व्यवस्था छ त ?
अन्य देशमा धेरै परिपाटी हुन्छन् । तपाईं त्यसलाई अन्य देशअनुसार गर्नुहुन्छ त । अन्य देशमा नागरिकताका विषयमा बेग्ला बेग्लै प्रावधान छन् । जस्तै अमेरिकामा जन्मिना वित्तिकै नागरिकता पाउँछ । अनि हामीले पनि त्यही गर्ने त । अमेरिकाको भूमिमा जन्मिने वित्तिकै नागरिकता त्यहाँको पाउँछ । अनि अरू देश भनेर हन्छ । हाम्रो देशको परिपाटी के थियो ? के निरन्तरता छ, त्यसलाई बदल्न किन पर्यो ।
मधेसका साथीहरुको माग पनि हिजो जसरी नागरिकता दिनुभएको थियो, आज पनि त्यसरी नै दिनुपर्यो भन्ने त हो । म त्यसमा सहमत छु । संविधान सभामा पनि यो मत राखेँ । अहिले पनि मत राख्छु । कुरा प्रष्ट छ । अब यस्तो होइन, भारतमा जाँदा ७ वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यही भारतबाट बिहे भएर यहाँ आउँदा ५ वा ७ वर्ष कुर्न नहुने किन भनेर भन्यो भने भारतमा त हिजो पनि त्यही व्यवस्था थियो । हिजो किन दिएको त प्रश्न उठ्छ ।
नागरिकतासम्बन्धी अर्को लफडा गैरआवासीय नेपाली नागरिकका सम्बन्धमा हो । यसमा कसरी अगाडि बढ्दा ठीक होला ?
यस विषयमा संविधान निमार्णका बेला पनि गहन छलफल भएको थियो । कहाँसम्म जाने ? कहाँसम्म नजाने ? कहाँसम्म हुन्छ, कहाँसम्म हुँदैन भन्नेबारे निकै नै छलफल भएको थियो । उनीहरुलाई दोहोरो सुविधा किन दिने ? तर ती सबै कुराका बाबजुत साझा विवेकबाट संविधान सभाले नेपाली नागरिक सरह कानुन बनाएर गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले समाजिक, आर्थिक, सांस्कृति अधिकार प्राप्त गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिले यसमा पनि चर्को आवाज उठेका देखिरहेको छु । त्यो अनुचित हो । नागरिकताको सम्बन्धमा यो नयाँ आयम हो । भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश श्रीलङ्काको मडेलमा नै हामीले नेपालको पनि गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हौँ । हामीले उनीहरुलाई जुन हैसियत दिने भनेका छौँ, त्यो कानुन बनाएर खुम्च्याउने भनेका हैन । तिनीहरुलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थित गर्ने भनिएको हो । यहाँ त उनीहरुको अधिकार खुम्च्याउने बारे छलफल भइरहेको छ, त्यो उचित हुँदै होइन ।
तपाईंले गैरआवासीय नेपालीको अधिकार खुम्च्याउनु अनुचित भनिरहँदा काँग्रेसकै प्रतिनिधि सभा सांसद दिलेन्द्र बडुले नै सबैभन्दा बढी विरोध गरिराख्नुभएको छ । यसमा त काँग्रेस नै एकमत देखिएन नि होइन र ?
म कसैले मसँग विमति राख्ने पाइँदैन त भन्दैन । त्यहाँ उहाँको आफ्नो कुरा भयो । मेले बुझेअनुसार तीन चारवटा कारण छन् । पहिले त एउटा परिचयपत्र मात्र दिने भनिएको थियो । अहिले परिचयपत्रको साटो नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका केही कारण र आधार छन् । ती कुरालाई समातेर हामी अगाडि बढ्यौैँ भने लिकमा पुग्छौँ । त्यसलाई बिस्र्यौं भने अर्को ठाउँ पुग्र्छौं ।
जस्तै तपाईंले कारण र आधारहरु भन्नुभयो, ती के–के हुन् ?
पहिलो आधार भनेको हामीले ०४६ सालपछि पासपोर्ट बनाउन सजिलो बनायौँ । त्यसले गर्दा करिब नेपाली जनसङ्ख्याको आधा जनसङ्ख्याले जेट चढिसक्यो । यो मैले तपाईंलाई भनिरहनु पर्दैन । जेट भनेको ३३ हजार फिटमाथिबाट उड्ने भनेपछि त्यो विदेशै जाने हो । नेपालमा अन्त जाँदैन ।
त्यसले नयाँ विश्वसँग पहिले राज्यका केही टाठाबाठाहरुको मात्र सम्पर्क हुन्थ्यो । अहिले आम नागरिकको सम्पर्क स्थापित भएको छ । विदेशमा बसेका उनीहरुले केही कुरा ल्याए भने देशको सामाजिक, आर्थिक सबै कुरामा परिवर्तन ल्याउँछ । मुलुकमा त्यो परिवर्तनको महशुस भइसक्यो । त्यो महशुससँगै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । जसले विदेशी नागरिकता लिएका छन् । तिनीहरूलाई कसरी नेपालसँगको सम्बन्धसँग कसरी जोडी राख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ ।
०४६ साल पहिले दुई तीन सय जना विदेश जाने गर्थे, त्यसलाई लिएर कानुन बनाउन आवश्यक थिएन । आज लाखौँ नेपालीभाषी विदेश गएर बसेका छन् । तिनीहरुलाई नेपालसँग कसरी जोडिराख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रूपमा आयो । अन्य मुलुकले पनि त्यो कुरा गरे । उनीहरुले बराबर हैसियतको दोहोरो नागरिकता दिए । उनीहरुले गैरआवासीयलाई भोट हाल्ने कुरामा मात्र फरक पारे । हामीले त्यति नगरे पनि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृति रूपमा समान व्यवाहार गर्ने भनेका छौँ ।
यो घरैपिच्छे समस्या भएर आएको छ । यसको समाधान गर्नुपर्यो कि परेन ? घरैपिच्छेको समस्याको समाधान गर्ने क्रममा गैरआवासीय परिचयपत्रले मात्र पुग्दैन नेपाली नागरिकतको हैसियत दिनुपर्ने हुन्छ ।
ब्रिटिस गोरखाहरु हामीलाई राजनीतिक अधिकार पनि चाहिन्छ भन्छन् । त्यो कुरा हामीले दिन सक्दैनौँ भने पनि उनीहरुले त्यो कुरा छोडेका छैनन् । हामी नेपाल सरकार, भारत सरकार र बेलायत सरकारबीचको सम्झौताबाट गएका व्यक्ति हौँ । हाम्रो नागरिकता नेपालको जन्मजात नागरिकता हो । कसरी खोस्छौ तिमी भनेर उनीहरुले ठूलो प्रश्न खडा गरेका छन् ।
दोस्रो पक्ष के भने हामीले गैरआवासीयलाई जोड्न सकेनौँ भने मुलुकको आर्थिक समस्या खडा हुन्छ । यहाँको जग्गा जमिनलाई कानुनी बाटोबाट वा गैरकानुनी बाटोबाट त्यसलाई तरल बनाएर राखेका छौँ । तपाईंलाई थाहा छ । गैरआवासीय नेपालीको सबै सम्पत्ति इलिगल हुन्छ भन्ने हल्ला चल्दा पोखरामा धरान, म्याग्दी यी सबै ठाउँमा दुईको दाम एकमा बेचेर हुन्डी मार्फत पैसा लिएर गए । त्यो कुरालाई रोक्न जरुरी छैन ? अर्को आधार त्यो हो ।
तेस्रो आधार, अहिले रिमिटेन्सको कुरा छ । फाउन्डट एक्सेसको आधार नै रिमिटेन्स प्रमुख आधार हो । रिमिटेन्स चाहिँ चाहिने अनि उनी उनीहरुलाई सुविधा दिनुपर्दैन ?
चौथो कुरा, जो जहाँ बसे पनि तपाईंसँग नेपालीभाषीहरुको जरा जोडिन परेन ? यी सबै कुराको छलफल संविधान बनाउँदा भइसक्यो । हिजो परिचयपत्रबाट नागरिकता दिने कुरा किन मानेको ? यो त बुझ्नु पर्यो नि ! कुन सांसदले के भने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छैन । महत्त्वपूर्ण कुरा यी हुन् ।
यसबाट फिजीकरण बढ्नसक्ने कतिपयको आशङ्का छ नि ?
कसरी बढ्छ फिजीकरण ? सार्क क्षेत्रका मान्छेमा यो लागू हुँदैन । यो त संविधानमै लेखिदिएको छ । सार्क क्षेत्रभन्दा बाहिर त्यो कुरा हिन्दुस्थानले पनि त्यही लेखेको छ । पाकिस्तानले पनि त्यही लेखेको छ, बङ्गलादेशले पनि त्यही लेखेको छ, श्रीलङ्काले पनि त्यही लेखेको छ । भनेपछि फिजीकरण हुन त सीमान जोड्नुपर्यो, यहाँ आउनुपर्यो । यहाँ बस्नुपर्यो । यहाँबाट मान्छेहरु अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा गएर बसिरहेका छन् । तिनका छोराछोरी तीन पुस्ताका मान्छे जसले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन्छन् । ती यहाँ आएर फिजीकरण बढ्छ । अरुलाई त दिनुभएको छैन । नेपालीभाषी त हुनुपर्यो । एक पुस्ता नेपाली नागरिक हुनुपर्यो । यसमा तर्क छैन, यो कुतर्क हो ।
'राजपा नेपाल विघटनको संघारमा पुगिसकेको छ'
भारतीय फिल्म उद्योगले सधैँ सत्ताधारीलाई साथ दिएको छ : नसिरुद्दिन शाह
इल माछा, जसको करेन्टले मान्छेलाई नै मार्न सक्छ !
पाँचखालका सम्पदा खोज्न ‘जियोफिजिकल सर्वे’
मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र समृद्ध बन्नुपर्छः राष्ट्रियसभा अध्यक्ष
रवीन्द्रको पुण्यतिथिः ‘एउटा समयले जन्माएको ‘क्यारेक्टर’
मध्यबानेश्वरमा अब ‘विरयानी अड्डा’
शेर्पा समुदायमा ग्याल्बो ल्होसारको रौनक, १२ तस्बिरमा हेरौं